Fidinana ifotony nijery ny fandrosoan’ny asa – METFP
Fidinana ifotony nijery ny fandrosoan’ny asa
Nidina ifotony nijery ny asa vita tao anatin’ny 20 andro tamina fokontany vitsivitsy tao anatin’ny boriboritany faharoa ireo delegasiona avy amin’ny FID izay notarihin’ny Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy, ny Lefitra faharoan’ny Ben’ny tananan’Antananarivo Renivohitra ary ny avy ao amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, notarihin’ny Tale Jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy.
Fokontany Andohanimandroseza, Ambohipo ary Avatr’Ankatso no notsidihana tamin’izany. Fanajariana zaridaina manodidina ny EPP Ambohipo, fanamboarana ny lalan-kely vita amin’ny « béton » sy tetezan-kazo, ireo no asa nataon’ireo mpisitraka maherin’ny 216 avy eo amin’ireo fokontany ireo sy ny manodidina.
Nitombo ny fahaiza-manaon’ireo olona mpisitraka ka afaka mampitombo ny fivelomany izy ireo ao aorian’izao Asa Avotra izao. Tsiahivina fa ny Asa Avotra dia natao mba hahafahan’ireo vondron’olona marefo ara-pivelomana misitraka asa ka ahazoany tambin-karama hivelomany. Mifototra amina sehatr’asa maro lafy izy io ka raha ny eto Antananarivo Renivohitra dia mahatratra hatrany amin’ny 142 ireo toerana havaozina sy hasim-panajariana.